IMaynooth ukuphela kwedolobha lasenyuvesi lase-Ireland futhi iyisikhungo semfundo nocwaningo. Ibhukhelwe yiMaynooth Castle ekugcineni kwedolobha, kanye ne-17th Century Carton House ngakolunye - zombili izihlalo zangaphambili zeDukes of Leinster. Idolobhana namuhla liyidolobha elihamba phambili labagibeli nabafundi elinezindawo eziningi zokuhamba, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezinto okufanele zenziwe. I-Maynooth yayiyindawo ebalulekile yokuma eRoyal Canal yezikebhe ngaphambi kokuba ujantshi wakhiwe ngo-1847. I-Royal Canal Greenway, engu-130km yezindlela zokuhamba nokuhamba ngamabhayisikili, ingafinyelelwa kusuka eMaynooth futhi iyindlela ephelele yokufika e-Kilcock, umsele- idolobha elingaseceleni bese kuqhubekela endaweni yedolobha engalimele yaseMoyvalley.
Izindawo zokudlela eziphuma phambili eMaynooth
Izinto Ezinkulu Eziyishumi okufanele zenziwe ngaseMaynooth
Funda okungakumbi ngo- Maynooth